မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-01 > အခြားသူများကိုကောင်းချီးပေးပါ
သမ္မာကျမ်းစာသည်နေရာ ၄၀၀ ကျော်တွင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကြောင်းအထူးဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်သူနှင့်သွယ်ဝိုက်သောနည်းများစွာရှိသည်။ ခရစ်ယာန်များသည်ဤအသုံးအနှုန်းကိုဘုရားသခင်နှင့်အတူသူတို့၏ဘဝတွင်အသုံးပြုလိုသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ၊ မြေးများ၊ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ မိဘများ၊ ဆွေမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်များတွင်“ ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ” ဟုရေးပြီး“ ဟဗက္ကုတ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့” ကဲ့သို့သောစကားစုကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားသောဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်မှုကိုဖော်ပြရန် သာ၍ ကောင်းသောစကားလုံးမရှိပါ။ သူ၏ကောင်းချီးများအတွက်သူအားနေ့စဉ်ကျေးဇူးတင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ တခြားသူတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။
Als Gott Abraham aufforderte, sein Heimatland zu verlassen, sagte er ihm, was er vorhabe: «Ich will dich zum grossen Volk machen und will dich segnen und dir einen grossen Namen machen, und du sollst ein Segen sein» (1. မောရှေ ၁2,1-2). In der Bibelausgabe Neues Leben steht: «Ich will dich zum Segen für andere machen». Diese Bibelstelle beschäftigt mich sehr und ich stelle mir oft die Frage: «Bin ich ein Segen für andere?»
သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုမည့်သူမည်မျှရှိသည်ကိုမည်သူသိနိုင်သနည်း။ လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏တစ်သက်တာအတွင်းလူ ၁၀၀၀၀ အထိသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ မည်မျှပင်သေးငယ်ပါစေ၊ ဤလူတိုင်းကိုကောင်းချီးဖြစ်စေနိုင်လျှင်အံ့သြစရာမဟုတ်ပေလော။ ငါတို့သခင်သာလျှင်အခြားသူများကိုကောင်းချီးပေးပါစေဟုဆုတောင်းရန်သာလိုသည်။
အဆုံးမှာတစ် ဦး အကြံပြုချက်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် John Wesley ၏ဘ ၀ အုပ်ချုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါကကမ္ဘာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
လူအားလုံးကို ဦး တည်ခြင်းနှင့်